संसद भंग भारतले भनेर गर्‍या हो, के भन्नुहुन्छ केपीजी? : प्रचण्ड (भिडिओ) :: Setopati
संसद भंग भारतले भनेर गर्‍या हो, के भन्नुहुन्छ केपीजी? : प्रचण्ड (भिडिओ) ‘जी-न्यूजसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता नाटकै हो’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्र सुनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित आफू पक्षका नेता, कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै प्रचण्डले भारतीय सहयोगअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेको हुन सक्नेतर्फ पनि संकेत गरेका छन्।
‘हामीले असारमा स्थायी कमिटीमा छलफल गर्दा मेरा साथीहरूले हटाउन खोजेका छन् भन्नु हुन्थ्यो। हामीले त्यतिबेला हटाएनौं। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौं नि त त्यतिबेला,’ उनले भने, ‘अनि अहिले उहाँले पार्टी विभाजन गर्ने, संसद भंग गर्ने भारतले भनेर गर्‍या? सारा जनताले देखे, बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी?’
उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ पनि मागेका छन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत नराखी बालुवाटारमा एक्लै तीन तीन घण्टा छलफल गर्ने?,’ उनले भने। पार्टीमा बहुमत गुमाएपछि ओलीले राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएको उनको भनाइ छ।
‘म भएको भए त यस्तो देख्नेवित्तिकै राजीनामा दिइसक्थें,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यो राष्ट्र र लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ। तर उहाँ त कुर्सी भाँचेर छोड्छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले कुर्सीमात्र होइन संविधान र राष्ट्र नै भाँचभुच गर्ने अवस्था आयो अब कसरी सहने?’
देश र संविधान धरापमा पर्दा ओली बिजेताजस्तो गरेर हाँसेको उनले बताए।
‘नराम्रो काम गर्दा त डर मान्ने हुनुपर्ने तर उहाँ खुसी हुनुभएको छ। भाङ खाएर नाचेकोजस्तो ताण्डप नृत्यजस्तो,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, ०४:४८:००
आलमलाई छुटाउन पहल गरिरहेको छु: देउवा
राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक फेरिए
सभामुखसँग छलफल गरेपछि मात्र संसद्मा कहाँ बस्ने कुराको निर्धारण- रावल